प्रम ओलीको अन्तर्घात
डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले भयानक नैतिक संकटमा परेको यो देशका लागि उनको जीवन आवश्यक रहेको अनुभूति गराएपछि उनले अनसन त्यागेका हुन । यो पटकको अनसन स्थगित गरेपनि देशमा डा.केसीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा सुधारका कार्यसूचिमा काम नभएसम्म अनसनको सम्भावना जीवित रहेको छ । डा.केसी जीवट प्राणी हुन । आपूmले जे गर्ने संकल्प लिएको हो त्यो पूरा नभएसम्म उनी पछाडि हटदैनन । कतिको नजरमा डा.केसी हठधर्मी हुन । तर, सामान्य नेपालीको नजरमा उनी ऋषितुल्य मानव हुन । वचनको पक्का । आत्मविश्वासले भरिपूर्ण । दृढ इच्छा शक्तिका स्रोत । उनले नउँडलेको भए चिकित्सा क्षेत्रमा चलि रहेको अनीति चलि नै रहन्थ्यो । समयले सुधारको बाटोमा यति लामो फडको मार्ने थिएन ।
यो पटक सरकारी पक्षले डा.केसीको काँधमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनसनको एजेण्डा बोकाएको आरोप लगायो । यो आरोप आफैंमा बिषम थियो । सरकारको पूरै एउटा पक्ष चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सक्रिय थियो भने अर्को पक्षले प्रचार प्रसारको कमान सम्हालेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महत्वपूर्ण ओहोदामा रहेका महानुभावहरु मेडिकल माफियाका सक्रिय हितैषी थिए । ती हितैषीहरुको चक्का जाम भएको खण्डमा ओली सरकारको टाउकोमाथि संकटका बादल मँडारिने सम्भावनाहरु थिए । ती सम्भावनाहरुको अन्त्यगर्न ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयकको पक्षमा साम दान दण्ड र भेदका चारै नीति अवलम्वन गरेको थियो । डा.केसीको विपक्षमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लटपट्याउने जुक्तिपनि निकालेका थिए कामरेडहरुले । अनसन बसेकै अवस्थामा डा. केसीको निधन भयो भने के गर्ने ? भन्नेसम्मका विषय निश्चित थिए । अन्ततः ती केही कुरापनि गर्न परेन । डा.केसी स्वयं पन्छिन तयार भए ।
यसलाई नागरिक समाजको जीत त नभनी हालौं । यो डा.केसीकै उच्च मनोवलको जीत हो । यो जीतपछि डा.केसीले आफनो अभियानलाई बढी तीखो बनाउने आशा सवैले राखेका छन । अभियानमा कुनै यस्तो छिद्रको गुन्जायश हुनुहुँदैन जसले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई पंगु र चिकित्सा अध्ययनलाई फितलो बनाओस । डा.केसीका समर्थकहरु दिन दुना र रात चौगुना हिसावले बढेका छन । उनले ती समर्थकहरुको चाहना अनुसार नै आपूmलाई प्रस्तुतगर्ने कुरामा शंका नगरौं । डा.केसीलाई नेपाली जनता शुध्द स्वास्थ्य उपचार सहज र सर्वसुलभ ढंगले सबैका लागि प्राप्त होस भन्ने अभियानमा लागेका नेपाली चिकित्सकका रुपमा चिन्दछन । उनीहरु नेपालका डाक्टर र नेपालका अस्पताललाई क्षमता–सम्पन्न तुल्याउन चाहन्छन । नेपाली डाक्टरबाट सही उपचार पाएनन भने तिनीहरुको अन्यत्र कतै जाने क्षमता छैन । विदेशका महंगा अस्पताल धाउने आर्थिक क्षमता उनीहरुसंग हुने कुरै भएन । विहान खाए वेलुका खान नपाउने परिस्थितिमा बाँचेका छन धेरै नेपाली । न त, पार्टीका नेताहरुले उनीहरुप्रति कुनै चासो देखाएका छन, न त नेताका आसेपासेको जस्तो राज्यको ढुकुटीमा नै उनीहरुको पहूँच छ । यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको जीवन रक्षाका बिरुध्द सरकार आफैं ताण्डव मच्चाउँछ । सरकारका आफन्तहरुले शिक्षण अस्पताल खोलेका छन, अस्पताल मात्रै खोलेका छन । यो स्थितिमा आफन्तहरुलाई मर्कापार्ने काम कसरी गरोस सरकारले ? यो एउटा अनौठो परिस्थिति छँदैछ सरकारका लागि । जनताभन्दा आफन्त ठूला भन्ने रोगले गाँजेको छ हाम्रो राजनीतिक र भृत्यतन्त्र समुदायका मानिसलाई ।
प्रम ओली नेतृत्वको सरकार चटकी खेलमा लागेको छ । गृहजिल्ला झापाको दमक पुगेर प्रम ओलीले बाल महोत्सवको उदघाटन गरेछन । त्यो समारोहमा उनले केटाकेटीलाई आपूmले संयुक्त राष्ट्रसंघ, ग्लोबल इकोनोमिक फोरम तथा अन्य फोरममा आपूmले गरेका ठूलठूला र असाधारण कामको कथा सुनाएको र ती कथा सुनेर विश्वका नेताहरु चकित परेको सुनाएछन । अहिले यो समाचार भाइरल भएको छ । यो प्रसंगमा डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले फेसबुकमा लेखेका छन – कसै कसैलाई ऐनासंग प्यार हुन्छ । कोही ऐनाको अगाडि उभिएर आफनो तारीफ गर्दछन । कतिलाई आत्मप्रशंसागर्ने खराव लत लागेको हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरु आफनो प्रशंसामा कविता, कथा लगायतका ग्रन्थहरु पनि लेखाउँछन । त्यही कुरामा उनीहरु मस्त हुन्छन । यसैकारण उनीहरुलाई आपूmले गरेका सबै काम सर्वोत्कृष्ट लाग्दछ र चमत्कारिक पनि । उसलाई देशपनि त्यस्तै चमत्कारिक बस्तु जस्तो लाग्दछ । तर, ऐना त आखिर ऐना नै हो । जय चमत्कार । जय समाजवाद ।
साँच्चै नै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार चमत्कार नै पर्खेर बसेको जस्तो लाग्दछ । प्रम ओली यति विश्वस्त देखिन्छन कि पेकिंगबाट केरुङहुँदै छिटै काठमाडौ आइ पुग्दछ चीनियाँ रेल । नेपाली पानी जहाज पनि राष्ट्रिय झण्डा लहराउँदै कोशीबाट छुटेर संसारका बिभिन्न बन्दरगाहहरुमा देखिनेछन । अवका दिनहरुमा समृध्दि आकाशबाट बर्सिनेछ । नेपाली जनताले समृध्दिको सिक्का टिपेर फुर्सद नै पाउने छैनन । विस्तारै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नजानिदो किसिमले संशोधनहुन थालेको छ । अमेरिका रिसाए रिसाओस । रेल न अमेरिकाबाट आउने हो, न अमेरिकाले दिने नै हो । यो अवस्थामा अमेरिका रिसाएर के नै हुन्छ र ? आखिर कति दिन रिसाउन सक्दछ नेपालसंग ?
देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीय सरकारलाइ कुनै चिन्ता छैन । उल्टै, संघीय सरकारमा बसेका मानिसका निकटस्थहरु संघीय र स्थानीय सरकार भए नेपाल चल्नेमा किन यो प्रदेश सरकारको घाँडो भिराएको ? भन्न थालेका छन । प्रदेश सरकारका बिरुध्द आक्रोशको सिर्जना गरेर संघीय पध्दतिको हुर्मतलिन खोज्ने कम्युनिष्ट नेताको कमी छैन । बिडम्बना यस्तो कि गाउँ पालिकाको सामान्य सदस्य पनि मुख्यमन्त्रीलाई चुनौति दिन्छ । प्रम ओलीका मन्त्रीहरु कोही पनि दक्ष छैनन । सबै प्रम ओलीका सर्गमा उपसर्ग जोडने मात्रै छन । यो स्थितिमा संघीयता सम्हाल्ने कस्ले ? कहाँ के त्रुटी भएछ भनेर हेर्ने र त्यसलाई सच्याउने भाव कसैमा छैन । यो विद्रूप अवस्थामा कसले कसलाई के भन्ने ?
राम्रो कुरा कि डा.गोविन्द केसीले आफनो ज्यान जोगाएका छन । नागरिक समाजका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद कि उनीहरुले डा.केसीलाई ज्यान जोगाउने कुरामा सहमत गराएका छन । अहिलेसम्मको अनुभवमा यो दुइ तिहाई भन्दा बढी संख्याको सरकार एउटा भीडभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन । यो सरकारले शासनलाई आफनो स्वार्थ अनुकूल संचालन गरेको छ । सर्वपक्षीय हितका काममा यसको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सिण्डिकेट पध्दतिको अन्त्यगर्ने कुरा उठ्यो । त्यो हरायो । बजार अनुगमनका कुरा भए ती सकिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गरिने कुरा उठ्यो त्यो पनि वैदेशिक रोजगारीको अर्को गन्तब्य खोजेर सकियो । वाइडबडी खरीदमा भ्रष्टाचार भए नभएको भनेर थालिएको छानवीन प्रक्रिया आफै अलमलमा पर्यो । यस्तोमा डा.केसीको अनसन किन टिक्न पर्यो ? डा. केसीका अन्तर्घाती स्वयं प्रम ओली हुन । प्रम ओली आफैले डा.केसीको मांग पूरागर्ने वचन दिएका थिए । समय आएपछि उनी आफनो वचनबाट विमुख भए । आफनो वचनमा कायम रहन नसक्ने यस्ता भूmठा प्रधानमन्त्रीको समयमा ज्यान बचाउनु नै ठूलो कुरा हो । डा.केसीको ज्यान बचेको छ । जनता पुलकित छन ।